ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိထိပ်တန်းကုန်တိုက်ကြီး ၁၀ ခု Absolut ခရီးသွား
ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိထိပ်တန်းစျေး ၀ ယ်စင်တာ ၁၀ ခု
လူးဝစ် Martinez | | ယူအက်စ်အေ
ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိအကောင်းဆုံးကုန်တိုက်ကြီးဆယ်ခုသည်ယင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည် အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ပျော်စရာ၏ယဉ်ကျေးမှု မြောက်အမေရိကကိုလက်စ်တွင်လွှမ်းမိုးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့နေသည်။ ဤအချက်ကိုသက်သေပြရန်မှာစပိန်နိုင်ငံတွင်ရှိနှင့်ပြီးသောဤစတိုးဆိုင်များ၏ပမာဏဖြစ်သည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်သည်တိုက်ကြီးတစ်ခုကဲ့သို့ကြီးမားပြီးမတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုများစုပေါင်းနေထိုင်ကြသည်။ သို့သော်ယင်း၏နေထိုင်သူအများစုသည်ပျော်စရာပျော်စရာလမ်းကိုတူညီကြသည်။ သူတို့ကထောက်ခံသူတွေပါ ကြီးမားသောအပန်းဖြေနေရာများ စူပါမားကက်များမှသည်စျေးဝယ်ထွက်ခြင်းအထိ၊ ရုပ်ရှင်၊ သို့ဖက်ရှင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များမှရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်အထိအရာအားလုံးကိုသူတို့ဘယ်မှာရှာတွေ့နိုင်သည်။ ကောင်းစွာစဉ်းစားမိသည်၊ အရာရာတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်ဟူသောမကောင်းသောစိတ်ကူးမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီ့ထက်ပိုပြီးမပြင်ဆင်ရသေးပါကဤကြီးမားသောစီးပွားဖြစ်နေရာများကိုသင်ပြတော့မည်။
1.1 အမေရိက၏ Bloomington Mall
1.2 Sawgrass Mills က
1.3 Prussia Mall ၏ဘုရင်
1.5 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကောင်းဆုံးစျေး ၀ ယ်စင်တာ ၁၀ ခုအနက်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်သည်
1.6 အဆိုပါ Galleria
1.8 Grove သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကောင်းဆုံးစျေးဝယ်စင်တာ ၁၀ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်
1.9 က Short တောင်ကုန်းမှာ Mall
1.10 South Coast Plaza, United States ရှိအကောင်းဆုံးကုန်တိုက်ကြီးဆယ်ခုအနက်မှတစ်ခုမှအနုပညာဖြစ်သည်
မှ နယူးယော့ Los Angeles မြို့နှင့်မှ ကျောက်ချစခန်း ထ ဟူစတန်, မြောက်အမေရိကတိုင်းပြည်တစ်ရှိပါတယ် စီးပွားဖြစ်နေရာများ၏ကြီးမားသောပမာဏ။ သို့သော်အချို့သည်သူတို့၏အရွယ်အစားနှင့်သူတို့၏ကမ်းလှမ်းမှုပြည့်စုံမှုအတွက်ထင်ရှားသည်။ သူတို့အကြောင်းသိရအောင်။
အမေရိက၏ Bloomington Mall
Bloomington သည်ခရိုင်ရှိမြို့ငယ်တစ်မြို့ဖြစ်သည် Hennepin (မင်နီဆိုတာ) ။ သို့သော်၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိထိပ်တန်းစျေး ၀ ယ်စင်တာ ၁၀ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအမျိုးမျိုးသောစျေးဆိုင် ၅၂၀၊ စားသောက်ဆိုင် ၅၀ ခန့်နှင့်ကလေးများအတွက်ဖြစ်သည် အကြီးဆုံးအပန်းဖြေပန်းခြံ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး၏။
ဒီကြီးမားတဲ့နေရာဟာလမ်း ၁၇ လမ်းမှာပျံ့နှံ့နေပြီးတစ်နှစ်ကိုအခမဲ့ဖြစ်ရပ်လေးရာလောက်စုစည်းထားတယ်။ ဤအရာအလုံးစုံမလုံလောက်သကဲ့သို့၎င်းတွင်ရုပ်ရှင်ရုံ ၁၄ ခု၊ ငါးမွေးကန်နှင့်သေးငယ်သောဂေါက်ကွင်းရှိသည်။
Sawgrass Mills က
ဒီကြီးမားတဲ့အလယ်ဗဟိုမှာမြို့ထဲမှာတည်ရှိပါတယ် နေထွက်, Broward ကောင်တီ, မြို့လယ်ကနေမိနစ်လေးဆယ်ကားမောင်း မိုင်ယာမီ။ ၎င်းသည်အတွင်းပိုင်းရှိစီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများကိုပေါင်းစပ်ထားသည် Sawgrass Mallအဖြစ်လူသိများareaရိယာ၌အိမ်ပြင်အခြားသူများနှင့်အတူ အိုအေစစ်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်တတိယတပ်ဆင်မှုရှိသည် Sawgrass Mills မှာမှာရှိတဲ့ Colonnadesကမ္ဘာ့ဈေးအမြင့်ဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအထူးလျှော့စျေးဖြင့်ရောင်းချပေးသည်။
Prussia Mall ၏ဘုရင်
၎င်းကိုမြို့ဆင်ခြေဖုံးတွင်တွေ့နိုင်သည် Philadelphia တွင်, Pennsylvania ပြည်နယ်၌တည်၏။ စတုရန်းမီတာ ၉၀၀၀၀၀ နီးပါးရှိပြီး၎င်းသည်ပိုင်ရှင်များ၏အဆိုအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိအကြီးဆုံးဈေးဝယ်စင်တာဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်စတိုးဆိုင် ၄၅၀၊ အရက်ဆိုင်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များ၊ အက်ပဲလ်၊ ဘာဘာ၊ လူးဝူဗူတန်သို့မဟုတ် Sephora ကဲ့သို့သောလူသိများသောအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှအချို့ရှိပြီးလက်ခံရရှိသည်။ နှစ်ဆယ်သန်း visitors ည့်သည် နှစ်။
၎င်းသည်မန်ဟက်တန်၏အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိပြီးနာမည်တူလမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ နယူးယော့နှင့်အတွင်း Time Warner ကိုရေးစင်တာဟိုတယ်များ၊ ဘားများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များစွာသိုလှောင်ထားသောမိုးမျှော်တိုက်အုပ်စုတစ်စုဖြစ်သည်။ ဤစျေးဝယ်စင်တာတွင် Swarovski, Armani သို့မဟုတ် Thomas Pink စသည့်အမြင့်ဆုံးနှင့်စျေးကြီးဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များ၏စတိုးဆိုင်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သူ့ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်များတွင်မင်း၌စားဖိုမှူးများစွာရှိသည် per seMichelin ကြယ်သုံးပွင့်ရှိသည် Masa, ဂျပန်အစားအစာနှင့်နယူးယောက်စီးတီးရှိအားလုံးအတွက်စျေးအကြီးဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစား။ အကယ်၍ သင်ဟာလမ်းလျှောက်ချင်လျှင်၊ အစာ ၂၀ ကိုမီတာသာဝေးသောနေရာတွင်သင်ကျော်ကြားသည် ဗဟိုပန်းခြံ.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကောင်းဆုံးစျေး ၀ ယ်စင်တာ ၁၀ ခုအနက်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်သည်
၎င်းသည်ဟိုတယ် Bellagio အဆောက်အအုံ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် Las Vegas မှ။ ၎င်း၏လှပသောဗိသုကာနှင့်အထင်ကြီးလေးစားဖွယ်အလှဆင်ကသင်အဆောက်အ ဦ များ၌သင်ရှာဖွေနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းစိတ်ကူးတစ်ခုပေးပါလိမ့်မည် ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံးစတိုးဆိုင်များ နှင့်ဇိမ်ခံ၏အန္တိမစကားရပ်။ Yves Saint Laurent, Chanel, Hermes, Gucci နှင့် Prada ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် Via Bellagio တွင်စတိုးဆိုင်များရှိသည်။
၎င်း၏အရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားတစ်ဖက်တွင်အရသာနှင့်အိတ်ကပ်အားလုံးအတွက်ထိုနေရာ၌ရှိသည်။ တကယ်တော့, ၂၅ ဒေါ်လာလောက်မင်းစားနိုင်တယ်။ ဤစျေးဝယ်စင်တာ၌ ality ည့်ဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများအနက် Gelato နှင့် Bellagio၊ Michael Mina သို့မဟုတ် Shintaro ကဖေးများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြလိမ့်မည်။
၎င်းသည်လူသိအများဆုံးစျေးဝယ်စင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် ဟူစတန် နှင့်တက္ကဆက်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုပင်။ မြို့၏အထင်ရှားဆုံးရပ်ကွက်နှစ်ခုဖြစ်သော Memorial နှင့် River Oaks ကြားတွင်တည်ရှိသောကြောင့်စျေးပေါသောထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနေရာမဟုတ်ပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရာနှင့်ချီသောဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်မြောက်မြားစွာ၊ ဟိုတယ်နှစ်ခု၊ ရေကူးကန်များနှင့်ဘဏ်များပင်လျှင်အံ့သြစရာကောင်းသည်။ ဒါဟာအစအထူးသဖြင့်အနီးအနားမှာပန်းခြံရှိပါတယ် Gerald D. Hines ရေကမ္ဘာ, သင်ဟူစတန်အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးရေအင်္ဂါရပ်တွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ။
၎င်းသည်မြို့ငယ်လေးတွင်ဖြစ်သည် McLean ၏ပြည်နယ်ပိုင် Virginia ဆိုင်၊ အရက်ဆိုင်နှင့်စားသောက်ဆိုင်လေးထပ်ရှိသည်။ ဤစင်တာတွင်တည်ရှိသည့်အမှတ်တံဆိပ်များထဲတွင် Adidas, Apple, Disney, Gucci, Diesel, Lego သို့မဟုတ် L'Occitane en Provence တို့ဖြစ်သည်။
စားသောက်ဆိုင်များအတွက် MacDonald's သို့မဟုတ် Shake Shack စသည့်အစာရှောင်စားသောက်ဆိုင်များသည်မက္ကဆီကန်သို့မဟုတ်အာရှရှိ Panda Express ကဲ့သို့သောအာရှအစားအစာများနှင့်အတူအမြောက်အမြားရှိသည်။
Grove သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကောင်းဆုံးစျေးဝယ်စင်တာ ၁၀ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်
ဒီအကြီးအအလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည် LA က, California, အခြားသူများကိုလေးစားမှုနှင့်အတူမူရင်းရှိပါတယ်။ တွေ့ပြီ အပြင်ဘက်ဒါကြောင့်မြို့ထဲမှာပဲအခြားရပ်ကွက်အတွင်းဖြစ်သကဲ့သို့။ အထူးသဖြင့်၎င်းကိုလူကြိုက်များတဲ့လမ်းမကြီး Drive မှာတွေ့နိုင်ပါတယ် လယ်သမားစျေးအစားအစာအပေါ်ပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။
The Grove ကိုဖွင့်သည့်လမ်းများပေါ်တွင်သင်လမ်းလျှောက်သွားသောအခါအိမ်များ၏ပုံသဏ္decorationာန်နှင့်စျေးဆိုင်များ၏အလှဆင်မှုများကြောင့်သင်သည် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းသို့ပြန်သွားသည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။ ယင်းတို့အနက် Anthropologie, Australia UGG, Madewell နှင့် Johnny Was, စားသောက်ဆိုင်မြောက်မြားစွာရှိသည် တဆယ်ရှစ်ရုပ်ရှင်ရုံ.
က Short တောင်ကုန်းမှာ Mall
၎င်းသည်ပြည်နယ်ပိုင်အက်ဆင်းစ်ခရိုင်ရှိနာမည်တူမြို့ငယ်လေးတွင်တည်ရှိသည် NJ။ ၎င်းတွင် Cartier၊ Louis Vuitton Dior သို့မဟုတ် Dolce & Gabbana ကဲ့သို့သောလူသိများကျော်ကြားသည့်နာမည်ကြီးတံဆိပ်များရှိသည်။ ပြီးတော့မင်းတို့ကိုအစာစားတဲ့စားသောက်ဆိုင် ၁၄ ခုပါ ၀ င်ပေမယ့်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီ သက်သတ်လွတ်အစားအစာ။ ယင်းတို့အနက် Primo Mercato, Nordstrom Marketplace Caféသို့မဟုတ် Forty Carrots
South Coast Plaza, United States ရှိအကောင်းဆုံးကုန်တိုက်ကြီးဆယ်ခုအနက်မှတစ်ခုမှအနုပညာဖြစ်သည်
ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိအကောင်းဆုံးစျေး ၀ ယ်စင်တာဆယ်ခု၏ခရီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတွင်တည်ရှိသည် ကော်စတာ Mesa, Orange County၊ California။ South Coast Plaza သည်အနုပညာစင်တာအပြင်သင့်အားဆိုင်ခန်းပေါင်း ၂၃၀ နှင့်စားသောက်ဆိုင် ၃၀ ထက်မနည်းကိုသင်ပေးသည် ဆက်ဖတ်ရန်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အခြားပြပွဲများကိုကမ်းလှမ်းသောစွဲမှတ်ဖွယ်ကော်လီယမ်။
ယခင်က Alexander McQueen၊ Hugo Boss၊ Balenciaga၊ Carolina Herrera၊ Ermenegildo Zegna နှင့် Christian Louboutin စသည့်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ဤစျေးဝယ်စင်တာတွင်အဆောက်အ ဦး များရှိသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကောင်းဆုံးစျေးဝယ်စင်တာဆယ်ခုကိုပြပြီး၊ သူတို့ဟာများပြားလှတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုပါ မြို့ငယ်တိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်ရှိသည်။ ဒါပါ စားသုံးမှု အတူတူပါပဲ ဘဝ၏အမေရိကန်လမ်း သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဘဝလမ်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိထိပ်တန်းစျေး ၀ ယ်စင်တာ ၁၀ ခု